सुदूरपश्चिम विशिष्टीकृत सहकारी संघको अध्यक्षमा डा. गोविन्दराज जोशी - सहकारीखबर
सुदूरपश्चिम विशिष्टीकृत सहकारी संघको अध्यक्षमा डा. गोविन्दराज जोशी
Share : 1,082
धनगढी : सुदूरपश्चिममा थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी संघको प्रारम्भिक भेला सम्पन्न भएको छ ।
भेलाले नवजीवन सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज जोशी को अध्यक्ष रहने गरी १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । हाल प्रदेशका ५० वटा सहकारी संस्थाको संघमा सहभागिता रहेको छ ।
सहकारी पसलहरुलाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले थोक उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरिएको अध्यक्ष जोशीले जानकारी दिनुभयो । संघले उत्पादक र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामग्री सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो ।
तदर्ग समितिको उपाध्यक्षमा उदयदेव सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख गणेश बहादुर चन्द, महा–सचिवमा सङ्गम सहकारी संस्थाका सचिव मनमोहन विष्ट, सचिवमा प्रेम सिंह भाट, कोषाध्यक्षमा शान्ति सिंह शाही रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यमा क्रमशः डम्बर बहादुर शाह, शिवराज बिसी, सुरेन्द्र केसी, कलावती स्वार, प्रयागराज जोशी, ठक्कर खडायत, खडक विष्ट, पुष्पराज भट्ट, जगतराम चौधरी, दान बहादुर रावल रहनु भएको छ ।